Nrube isi na nkwekọrịta Paris agaghị egbochi ihe omume El Niño | Netwọk Mgbasa Ozi
Ebumnuche bụ isi nke nkwekọrịta Paris bụ iji zere ịbawanye ụba okpomọkụ zuru ụwa ọnụ site na ogo 1,5 karịa ọkwa ọkwa tupu ụlọ ọrụ. Agbanyeghị na enwere ike mezuo ebumnobi a ma kwụsie ike na ọkwa ahụ, mgbanwe ihu igwe na-eme ka ụba na oke ike nke nsogbu El Niño ga-aga n'ihu otu a na narị afọ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ebumnuche nke Nkwekọrịta Paris, nke a agaghị arụ ọrụ iji kwụsie ike El Niño. A na-eduzi ọmụmụ ihe a site na ebe nyocha dị n'Australia na China. Chọrọ ịmatakwu banyere mmetụta nke El Niño?
Mmụba na El Niño onu
Okpomoku na-aga n’ihu nke mpaghara ọwụwa anyanwụ nke mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Pacific na-akpata site na okpomoku zuru ụwa ọnụ na ikuku gas na-ekpo ọkụ, Ha na-eme ka ihe omume El Niño na-abawanye na ugboro na ike. Na mbu, El Niño nwere usoro nke afọ 7, ebe ọ bụ ihe omume ihu igwe, gbanwere ihe La Niña. E nwere ihe akaebe na ihe ngosi El Niño dị ka nke a ogologo oge. Agbanyeghị, mgbanwe ihu igwe na-eme ka ọ na-eme na oke ọsọ na ike karị.
Ihe omume El Niño na-adịkarị na-adịkarị njọ na-eduga ná nsogbu ndị ka njọ maka mba ndị na-ata ahụhụ na ya, dị ka Peru. Onye ndu akwukwo bụ Guojian Wang kwuru na nsogbu dị ugbu a nke El Niño dị bụ 5 kwa narị afọ mana na 2050, mgbe okpomoku na-amụma na ruru 1,5 ogo, na ugboro ole ga-okpukpu abụọ 10 ikpe.
Iji mara mmetụta na ugboro ugboro nke ihe omume El Niño na-eme n'ọdịnihu, e jirila usoro ihu igwe ise mee ihe nke dabere na ọnọdụ ụwa niile nke ikuku gas na-ekpo ọkụ pere mpe. N'aka ozo, ha bu nsi anwuru nke uwa nile nke IPCC kwuru na ogabu ma oburu na emezuru ihe a choro na Paris Agreement. Ọnọdụ ndị dị egwu El Niño na-eme mgbe etiti mmiri ozuzo na Pacific na-aga South America, nke na-akpata mgbanwe na ihu igwe, nke na-eme ka ọ pụta ìhè na ọwụwa anyanwụ nke etiti na-aga.
Ya mere, mmetụta nke mgbanwe ihu igwe bụ nke a na-apụghị igbochi. Naanị ihe anyị nwere ike ime bụ ime ka obi jụrụ ha ruo n’ókè anyị nwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ikwenye na nkwekọrịta Paris agaghị egbochi ihe omume El Niño
'' Ọ bụrụ n 'ị ga-erubeghị afọ iri atọ na abụọ, ị bibeghị otu ọnwa na ọnọdụ ụwa dị ala karịa nkezi' '
Mmiri na-agbaze agbaze na Arctic na-ahapụ methane!